The Rohingya News Bank : MMT
Showing posts with label MMT. Show all posts
မောင်တောမြို့နယ်တွင် အင်တာနက်လိုင်းများ ပြန်ဖွင့်ပေး
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့နယ်အချို့ကိုပြသသည့် မြေပုံ။ဓာတ်ပုံ - တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ရေးပဋိပက္ခများကို အကြောင်းပြု၍ အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့်ပိတ် ထား သည် မြို့နယ် ကိုးမြို့နယ်အနက်မှ မောင်တောမြို့နယ်တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ကို ယနေ့မေ ၃ ရက်၌ ပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးလိုက်ကြောင်း မောင်တောဒေသခံများထံမှ သတင်းရရှိသည်။
“ဒီနေ့မနက်ကတည်းက အင်တာနက်လိုင်းတွေ ပြန်သုံးလို့ရနေပါတယ်” ဟု မောင်တော်မြို့ပေါ်တွင် နေထိုင် သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
Labels: 2020, mm, MMT, သတင်း, အင်တာနက်ပြန်ဖွင့်, မောင်တောမြို့
လှိုင်သာယာတွင် အထောက်ထားမဲ့ဝင်ရောက်လာသူ ၄ ဦး ဖမ်းမိ
လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်း အထောက် အထားမဲ့ဝင်ရောက်လာသူ ၄ ဦးကို ယနေ့ဧပြီ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဖမ်း ဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ဧပြီ၁၉ရက်မွန်းလွဲ၁နာရီခွဲခန့်တွင် လှိုင်သာယာ(အနောက်ပိုင်း)မြို့နယ်(၁၈)ရပ်ကွက်၊အနော်ရထာလမ်းမရှိ DENKOဆီဆိုင်တွင် အထောက်အထားမဲ့ဝင်ရောက်လာသူများဟု ယူဆရသူများ ဆီလာထည့်နေကြောင်း သတင်းအရ အဆိုပါဆီဆိုင်သို့သောင်ကြီးနယ်မြေရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ်စစ်အောင်ပိုင်နှင့်အဖွဲ့နှင့် ရပ်ကွက်အုပ် ချုပ်ရေးမှူးတို့ပါဝင်သည့်ပူးပေါင်းအဖွဲ့က သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
Labels: 2020, mm, MMT, စစ်တွေမြို့, ဖမ်းဆီး, သတင်း, အထောကအထားမဲ့
ဖမ်းထားသည့် တပ်မတော်သားများအနက် ဒဏ်ရာရထား သူနှစ်ဦးကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုဟု AA ထုတ်ပြန်
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် မုန့်သန်းပြင်ရွာအနီး ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိသည့် တပ်မတော်သား ၃၀ ကျော်ရှိသည့်အနက် တပ်မတော်သားနှစ်ဦးကို ကျန်းမာရေး အခြေအနေ စိုးရိမ်ရ သဖြင့် ပြန်လွှတ်ပေးလိုကြောင်း AA က မတ် ၁၂ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Labels: 2020, AA, mm, MMT, တပ်မတော်သား, ဒဏ်ရာရ, သတင်း
Labels: 2020, mm, MMT, ဖမ်းဆီ, ရိုဟင်ဂျာ, အထောက်အထားမဲ့
Switzerland grants asylum to Arakan Army leader’s wife, children
The wife and two children of Arakan Army (AA) leader General Tun Myat Naing have flown to Switzerland after being granted political asylum, the ethnic armed group said on Wednesday.
Khaing Thu Kha, AA spokesperson, said Ma Hnin Zar Phyu and her 11-year-old daughter and one-year-old son left Bangkok for Switzerland on Tuesday.
The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) arranged the asylum, he said.
“We are very thankful to the UNHCR, the friends who helped in this process, and the Thailand government, which acted humanely, not like the Singapore government,” he added.
Labels: 2020, AA, Children, en, MMT, News, Switzerland, UNHCR, Wife
ICJ ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏လျှောက်လဲချက် မြန်မာ ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုပေးရန် ပြည်ခိုင်ဖြိုးတောင်းဆို
ICJ ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၇၄ မျက်နှာပါ လျှောက်လဲချက်ကို အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာဘာသာသို့ပြန် ဆိုပေးရန် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကတောင်းဆိုကြောင်း ယင်းပါတီပြောခွင့်ရ ဒေါ်ယဉ်မင်းမြင့်ဆွေက ပြောသည်။
မြန်မာ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါးမည့် ICJ အရေး၊ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး ရှိ/မရှိ အစိုးရ၏ပြတ်သားသည့်အဖြေ၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ပြောကြားချက်အပေါ် ပြန်လည်ရှင်းလင်းခြင်း စသည့်အကြောင်း အရာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို နေပြည်တော်ရှိ ရတနာ သိင်္ဃဟိုတယ်၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကာ ယင်းသို့ တောင်းဆိုလိုက် ခြင်းဖြစ်သည်။
Labels: 2020, ICJ, mm, MMT, ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ, ဘာာပြန်တောင်းဆို, သတင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ခွင့်ပြုချက်မဲ့ဆောက်သည့် တိုက်ပွဲ ရှောင်စခန်း အမြန်မပိတ်ပါက အရေးယူမည်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အချို့ကိုပြသသည့်မြေပုံ။ဓာတ်ပုံ - တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ခွင့်ပြုချက်မဲ့ဆောက်ထားသည့် တိုက်ပွဲရှောင်စခန်း အမြန် မပိတ်ပါက ဥပဒေအတိုင်း ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူမည်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းသန့် က မြန်မာတိုင်းမ်သို့ ပြောကြားသည်။
Labels: 2020, mm, MMT, ခွင့်ပြုမဲ့, စစ်ဘေးရှောင်, ရခိုင်ပြည်နယ်, အရေးယူမည်
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး အပြောင်းအလဲဖြစ်မည်ဟု သမ္မတရုံး အတည်ပြု
တရုတ်သမ္မ ရှီကျင့်ဖင်နှင့် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်အား ဂါရဝပြုနေသည့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေအားတွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနေရာ အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်တွင်နိုင်ငံတော် သမ္မတအိမ်တော်၌ပြုလုပ်သည့် ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက အတည်ပြု ပြောဆိုသည်။
Labels: 2020, mm, MMT, ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး, သတင်း, အပြောင်းအလဲ
ရခိုင်မှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုများ တာဝန်ယူစေ ခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်တွင်းရှိ ဥရောပသမဂ္ဂ သဘောထား ထုတ်ပြန်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကျူးလွန်ခဲ့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုများအတွက် တာဝန်ယူစေခြင်းနှင့် စပ် လျဉ်း၍ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်ကို ပြည်တွင်းရှိ ဥရောပသမဂ္ဂက ယနေ့ဇန်နဝါရီ၂၇ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး ၊ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများနှင့် သံ ရုံးအကြီးအကဲများက အဆိုပါသဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကြေညာခြင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အမျိုးမျိုးသော ပဋိပက္ခများ၏ အခြေခံအကြောင်းတရားများအား ကိုင် တွယ်ဖြေရှင်းရန် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးရန်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံ ပေးကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်များကို အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသများတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကူညီရန် ဥရောပသမဂ္ဂက အသင့်ရှိနေ ကြောင်း ယင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
Labels: 2020, mm, MMT, သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်, ဥရောပသမဂ္ဂ
မောင်းပြေးသည့် ယာဉ်ကို လိုက်လံဖမ်းဆီးရာက ဘင်္ဂါလီ( ရိုဟင်ဂျာ) ၁၀ ဦး ဖမ်းမိ
မင်းဘူး၌ တံတားပေါ်မှ မောင်းပြေးသည့် ယာဉ်ကို လိုက်လံဖမ်းဆီးရာက အထောက်အထားမဲ့ဝင်လာသူ ( ရိုဟင်ဂျာ)ဘင်္ဂါလီ ၁၀ ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ဆက်လက် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း ဇန်နဝါရီ၉ ရက်က ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် နံနက်တွင် မင်းဘူးမြို့ဘက်မှ မကွေးမြို့သို့ မောင်းနှင်လာသော probox ယာဉ်တစ်စီးမှာ ဧရာဝတီတံတား (မကွေး) ဂိတ်သို့အရောက် တာဝန်ကျနေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား မြင်သည်နှင့် ပြန် လှည့်ကာ မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
Labels: 2020, mm, MMT, ဖမ်းဆီး, မင်းဘူးမြို့, မတွေးမြို့, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
အစိုးရနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် AA အဖွဲ့ကို တရုတ်ဖိအား ပေးခဲ့
ဓာတ်ပုံ - The Kachin Net
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် စစ်ရေးနည်းဖြင့်ဖြေရှင်းမှုထက် အစိုးရနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို များ များလုပ်ရန် ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(AA)အား တရုတ်အစိုးရက ဖိအားပေးခဲ့ကြောင်း ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့(PCG)မှ ဦးဆမ်အောင်က ပြောသည်။
Labels: 2020, AA, mm, MMT, တရုတ်, ဖိအားပေး, ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်, သတင်း
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် အိန္ဒိယက ကူညီ ထောက်ပံ့သည့်ပစ္စည်းများ ပထမအသုတ်ရောက်ရှိ
စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူလူထုအတွက် အိန္ဒိယအစိုးရကကူညီပေးသည့် အစားအသောက်များ စစ်တွေဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိလာစဉ်။ဓာတ်ပုံ - ရဲမင်းဦး
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲ များကြောင့် စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူလူထုအတွက် အိန္ဒိယအစိုးရက ကူညီပေး သည့် အစားအသောက်များ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်က စစ်တွေ ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာန(စစ်တွေ)မှ သိရသည်။
Labels: 2020, mm, MMT, ကူညီထောက်ပံ့ပစ္စည်း, ပထမသုတ်, သတင်း, အိန္ဒိယ
တရုတ်က မြန်မာရဲ့ အားကိုးရာ ဖြစ်နေပြီလား
ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၉၊ ကြာသပတေးနေ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ရိတို့ ယခုလဆန်းက နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံစဉ်။ ဓာတ်ပုံ - နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အင်န်အယ်လ်ဒီ)က အစိုးရအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒများသည် အနောက်ဘက်သို့ယိမ်းမည်ဟု ပြည်တွင်းပြည်ပမှ နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူများက မှန်းဆခဲ့ကြသည်။
Labels: 2019, mm, MMT, တရုတ်, မြန်မာ, သတင်း
နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှု တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများဖြေ ရှင်းရန် အထူးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်အဆောက်အဦ။ ဓာတ်ပုံ- မြန်မာတိုင်းမ်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေ ချုပ် ရုံးမှဦးဆောင်ကာ နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အထူးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း နိုင်ငံ တော် အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနက နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှု တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ လူသားအရင်း အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများသို့ ဥပဒေကြောင်းအရ အကြံပြုနိုင်ရန် နိုင်ငံတ ကာ ရာဇဝတ်မှု တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအထူးအဖွဲ့ (SUICJ)ကို ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းအဖွဲ့ကို ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးကဦးဆောင်ကာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် စစ်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့မှ ဥပဒေပညာရှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
Labels: 2019, ICJ, mm, MMT, သတင်း, အထူးအဖွဲ့ဖွဲ့